Umoya omtsha emaphandleni-Gîte Les Lavandes
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguOphélie
Wamkelekile kwiLes Lavandes gîte, indawo entle eneenkwenkwezi ezi-4 ezine-57m² enokuhlalisa abantu aba-3, ibekwe emaphandleni kwindawo ekwanti e-Aisne, imizuzu eli-15 ukusuka eChâteau-Thierry kunye neyure enye ukusuka eParis. Uya kuhlala kumgangatho olingana ikhaya endala nesithunzi "Les Bories en Champagne" kwaye baya kunandipha igadi entle ngobuqholo esimnandi zelavenda kunye Provençal landscape enkosi bories, kooronta amatye owomileyo eyenziwe ngesandla ngokwemikhosi zenu.
Ngaphakathi, uya kufumana zonke izixhobo eziyimfuneko zokuhlala kwakho: ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo / igumbi lokudlela le-24 m2 *, igumbi lokuhlamba kunye nezixhobo zalo * ezikhoyo; igumbi lokuhlala le-7 m2 kunye ne-sofa kunye ne-flat screen TV (iitshaneli ze-TNT) kunye nokufikelela ngokuthe ngqo kwi-terrace; Igumbi lokuhlambela labucala elineshawa kunye nesinki ephindwe kabini, iWC, igumbi lokulala eli-1 elinebhedi ephindwe kabini edibana negumbi lokulala elincinane lesibini elinokwamkela umntwana, indawo yokulala eyi-22 m2.
Ngaphandle, unendawo yakho yabucala enescreen, edibana nendlwana, kubandakanya nefenitshala yegadi, iparasol egxothiweyo, ibarbecue, isofa yegadi kunye netafile yayo yekofu. Uya kuba nokufikelela kwigadi enkulu ekwabelwana ngayo ziindawo zokulala ezimbini apho unokonwabela inkundla ye-pétanque, imidlalo yabantwana, uhlale ngokuzolileyo kufutshane ne-bories kwaye ujoje ivumba elimnandi lamabala e-lavender mini.
* Ikhitshi kunye nempahla yokuhlamba:
Umatshini Coffee, Isitovu, eziko, iketile yombane, ukuhlamba umatshini, njengesicocisi, ukuba umatshini wokomisa, microwave, ifriji, ngetoaster, faka isitovu, iimveliso zasekhaya, intsimbi kunye ayina ibhodi, ikharakhtha, ngetshaneli yokubeka impahla.
4.87 ·Izimvo eziyi-61
4.87 · Izimvo eziyi-61
Indlu yeMbali lomlinganiswa, xa ngokuntywiliselwa ngokupheleleyo kunye nendalo engqongileyo: iiloni calcicole owakhiwa ngayo lweentlobo ezinqabileyo, kunye nomzila ukunyuka intaba kunye site Gallo-laseRoma iintsalela: i Butte de Beaumont / yonduluka iminquba Roma Entliziyweni endalo, uthathe ithuba esi seto sihle sokutshaja iibhetri zakho!
Ifumaneka ngexesha lokuhlala.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Montlevon